Sheekada filimka Dhadak: Sheeko dheeli tiran, Ishaan & Janhvi u daawo filimkan wacan – Filimside.net
Sheekada filimka Dhadak: Sheeko dheeli tiran, Ishaan & Janhvi u daawo filimkan wacan
July 20, 2018 Zakarie Abdi
Taariikhda: July 20, 2018
Dhibaatada ugu weyn Hindiya ka jirto sidoo kalena aan ka dhamaan doonin waxay tahay marka ay jaceyl wadaagaan labo dhalin yar oo aan isku dabaqad ama diin ahayn inaysan is calfanin dhaqanka oo aad ugu weyn Hindiya iyo bulshada oo aan marnaba isku soo dhawaanin ama is aqbalin inay nolosha isku darsadaan meelna iska dhigaan dabaqada u dhaxeyso!
Sidaa darteed filimka Dhadak ee lagu soo caan bixinaayo Ishan Khattar iyo Janhvi Kapoor waxaa sheeko ahaan laga soo min guuriyay filimka Marathi-ga ah Sairat kaasi oo sheekadiisa jaceyl Blockbuster-ka ahayd kusoo idleenay hab murugo ah.
Jilaayaasha Filimkan: Ishaan Khatter, Janhvi Kapoor, Ashutosh Rana, Shridhar Watsar, Ankit Bisht.
Waqtiga Uu Soconaayo: 2-saac iyo 17-daqiiqo ama 137-daqiiqo
Muxuu Ku Wanaagsan Filimka Dhadak: Qaabka sheekadiisa nuxur ahaan loo dhigay oo heer sare ah iyo bandhiga xasuus kugu reebi doono oo ay la imaadeen labada fanka ku cusub Ishaan Khatter iyo Janhvi Kapoor.
Muxuu Ku Liitaa Filimka Dhadak: Waxaad qalad galeysaa marka Dhadak iyo filimka sheekadiisa laga soo qaatay Sairat aad isku meel dhigto, iska hilmaan Sairat kadibna daawo Dhadak markaas heer sare ayuu kuu noqonaa laakiin haddii aad Sairat la bar bar dhigtid filimkan iin badan uu leeyahay ayaa soo baxeyso.
Fariinta Filimka Dhadak Oo Kooban: Filimkan wuxuu ka hadlaa labo dhalinyaro oo aan isku dabad ahayn sida jaceyl u dhex maraayo iyo caqabadaha xanuunka badan oo ay la kulmayaan.
Madhukar Bagla (Ishaan Khatter) wuxuu kasoo jeedaa qoys dabaqada hoose Hindiya kasoo jeedaan sidoo kalena dagan magaalada Udaipur ee gobolka Rajasthan ka tirsan.
Wiilkan dhalinta yar ee daacada ah wuxuu jaceyl u qaadayaa sidoo kalena iska helayaan gabadha lagu magacaabo Parthvi Singh (Janhvi Kapoor) oo uu dhalay siyaasiga caanka ah ee dabaqada sare hodanka ah ka tirsan mudane Ratan Singh (Ashutosh Rana).
Labada dhalinta yar jaceylkooda oo meel heer sare ah maraayo ayaa dhibaato lama filaan ah dhaceysaa mar ay kasoo qayb galaaan Madhukar Bagla (Ishaan Khatter) iyo saaxiibadiisa Parthvi walaalkeeda Godaan Kumar (Roop Kumar) xaflad dhalasho loo dhigay.
Ratan Singh (Ashutosh Rana) ayaa qabanaayo ama arkaayo gabadhiisa Parthvi Singh (Janhvi Kapoor) oo jaceyl la wadaageyso Madhukar Bagla (Ishaan Khatter)!
Madhukar Bagla (Ishaan Khatter) iyo saaxiibadiisa la socdeen saldhiga booliska ayaa lagu xiraa halka Parthvi guriga lagu reebayo.
Laakiin Parthvi Singh (Janhvi Kapoor) ayaa saldhiga soo gaareyso kadibna soo deyneeso jaceylkeeda Madhukar Bagla (Ishaan Khatter) iyo saaxiibadiisa.
Madhukar Bagla (Ishaan Khatter) iyo Parthvi Singh (Janhvi Kapoor) waxay go’aan ku gaarayaan inay Kolkata u baxsadaan halkaasna ay nolol cusub ka bilaabaan si ay kaga dhex baxaan dadkooda oo dabaqado kala duwan u kala qeebsan nololna wadaagi karin.
Waxa xiga ee filimkan loo daawan doono ayaa ah Parthvi Singh (Janhvi Kapoor) iyo Madhukar Bagla (Ishaan Khatter) labadooda qoys kaga imaanayo iyo dhibka loo geesanayo oo markii dambe ku qasbaayo inay ifka isaga tagaan sida filimka Sairat oo kale inay dhamaadka filimka is dilaan markii ay meel u baxsadaan nolol ahaan waayaan.
Director Shashank Khaitan ayaa filimka Dhadak u hagar baxay qaabka uu isugu daba riday inkastoo filimka Sairat uu sheekada kasoo min guuriyay filimkan hadana xoogaa waxbuu ka badalay si filimkan u noqdo mid Hindiya oo dhan laga daawan karo.
Director Shashank Khaitan si cajiib badan ayuu isugu daba riday bandhiga ay sameenayaan Jahnvi iyo Ishan oo si heer sare ah shaashada qaab jiliin badan ula imaadeen.
Bandhiga Jilaayaasha: Inaba caadi ma ahan qaab jiliinka kartida iyo masuuliyada ka muuqato uu la yimid Ishaan Khatter oo loo maleeyo jilaa waaya arag ah waana hubaal in aqoonsi weyn ku heli doono filimka Dhadak sida uu muqaal wabo wajiga looga bahan yahay heer sare ugu matalay.
Hubanti ahaan reer Kapoor xidig ayay heleen waana Janhvi Kapoor waayo filim dhib badan sameyntiisa fariin ahaan ayay Bollywood-ka kusoo gashay waxayna doorkeeda kaga baxsatay si heer sare ah.
Janhvi Kapoor waxay sii wadi kartaa magacii hooyadeed Sridevi waa haddii ay joogteyso qaab jiliinkan heerka sare kusoo bandhigtay Dhadak iyo doorashada fariimo heer sare ah.
Ruug cadaa Ashutosh Rana si wacan ayuu doorkiisa xumaanta kaga baxsaday waana jilaa ku xeel dheer sida doorarka ad adag loo matalo qayb wacana wu ka qaatay filimka Dhadak.
Gunaanad: Dhadak waa filim wax badan isku kaa shadeen bandhiga hogaamiyaasha, qaabka sheekada loo dhigay, heesihiisa oo hirgaleen iyo filim caan ah oo sheekadiisa laga soo min guuriyay intaas oo dhan waxay sababi doontaa in Ishan iyo Jahnvi bilaabasho wanaagsan Bollywood-ka la imaadaan inta dhimana calafkooda ayay sugan doonan balse Dhadak waa filim kusoo dhaweeyay Bollywood-ka.
Fadlan hoos ka daawo goos gooska filimka Dhadak